ဖလော်ရီဒါမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသက်အငယ်ဆုံးအဖြစ် ၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး သေဆုံး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ဖလော်ရီဒါမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသက်အငယ်ဆုံးအဖြစ် ၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး သေဆုံး
STAMFORD, CONNECTICUT - APRIL 24: (EDITORIAL USE ONLY) Breathing tubes hang next toaman with COVID-19 onaventilator ataStamford Hospital Intensive Care Unit on April 24, 2020 in Stamford, Connecticut. The hospital opened additional ICUs to deal the the vast number of people suffering from the coronavirus pandemic, and roughly half of the patients at the hospital are COVID-19 positive. Stamford, with it's close proximity to New York City, has the highest number of COVID-19 patients in the state. (Photo by John Moore/Getty Images)
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသွားပြီး ဖလော်ရီဒါမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသက်အငယ်ဆုံး သေဆုံးသူ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဟေးလ်ဘရော့ စီရင်စုမှာ နေထိုင်တဲ့ ကလေးငယ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးကြောင်း ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနက သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်တာပါ။ မိန်းကလေးငယ်ဟာ ဘယ်လို ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်တယ်၊ အဲဒီ မတိုင်ခင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုတော့ အများပြည်သူအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်နေတဲ့ ကလေးသူငယ် ၄၈၀၀၀ ကျော် ရှိနေပြီး အဲဒီအထဲက ၆၀၀ ခန့်က ဆေးရုံတက်နေရကာ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့အထိ သေဆုံးတဲ့ကလေးငယ် ရှစ်ဦး ရှိပါတယ်။
အခု အသက် ၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် မသေဆုံးခင် ပတ်တနန် စီရင်စုမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အမရေိကနြ ပှညထြောငစြုမှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစကသြူ ၅ သနြးခန့ြ ရှိနပှေီး အဲဒီအထဲက ၃၃၈၉၈၂ ဦးဟာ ကလေးသူငယတြှေ ဖှဈကှပါတယြ။
ဖလောျရီဒါမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ အသကျအငယျဆုံးအဖွဈ ၆ နှဈအရှယျ မိနျးကလေး သဆေုံး
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်သူ ၅ သန်းခန့် ရှိနေပြီး အဲဒီအထဲက ၃၃၈၉၈၂ ဦးဟာ ကလေးသူငယ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Previous article∎ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးမှာ တည်ဆဲ ဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့လိုဟုဆို
Next articleကွန်ဂို ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံမှာ အီဘိုလာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု တကျော့ပြန် ခေါင်းထောင်လာ